Kuba Bait kubva kuVabvu | Martech Zone
Chitatu, Kurume 21, 2007 Svondo, Ndira 21, 2018 Douglas Karr
Wakamboenda kunoraura kwaunoramba uchidonhedza mutsetse wako uye maminetsi mashoma gare gare chirauro chako chaenda? Pakupedzisira, iwe unotora mutsara wako woenda kumwe kunhu, handiti?
Ko kana isu tikashandisa izvi kune Phishing? Zvichida munhu wega wega anogamuchira email yekubiridzira anofanirwa kubaya kuburikidza nekubatanidza uye nekuisa ruzivo rwakaipa mukutumira kana Kiredhiti Kadhi zvinodiwa. Zvichida isu tinofanirwa kunyatsokunda maseva avo netraffic yakawanda zvekuti vanorega!
Hazvingave here izvi kuva dziviriro inosemesa pane kungoedza kuona nzvimbo dzePhishing uye kudzivisa vanhu kubva kwadziri?
Maererano ne Wikipedia: Mukushandisa komputa, phishing chiitiko chematsotsi uchishandisa hunyanzvi hwekugadzira zvinhu.  Phishers vanoedza kubiridzira kuwana ruzivo rwakakomba, senge mazita evashandisi, mapassword uye kadhi rechikwereti, nekunyepedzera sechinhu chakavimbika mukutaurirana kwemagetsi. Ebay nePaypal ndiwo maviri emakambani anotariswa zvakanyanya, uye mabhanga epamhepo zvakare zvakajairwa. Phishing inowanzoitwa pachishandiswa email kana meseji,  uye inowanzo nongedza vashandisi kune webhusaiti, kunyangwe kufona kwakashandiswa zvakare.  Kuedza kubata nenhamba iri kuwedzera yezviitiko zve phishing zvinosanganisira mutemo, kudzidziswa kwevashandisi, uye matanho ehunyanzvi.
Ndiri kuda kuziva kana izvi zvichizoshanda. Mhinduro?
Heino email ye phishing iyo yandinogamuchira zuva rega rega mune yangu email:
Ini ndinoshuva chaizvo dai ndaigona kukanganisa ava varume kumusoro. Nenzira, Firefox inoita darn basa rakanaka rekuona aya masayiti:
Kunyangwe iwe usingakwanise kudzivirira chero munhu kubva mukubiridzira yako kambani mune yehunyengeri email, iwe unogona kuona kuti ISPs inosimbisa kununurwa kwako usati wavatendera mubhokisi rebhokisi haikwanise kuongorora mavambo avo. Izvi zvinoitwa pamwe nekuitwa kwe email kusimbiswa masisitimu senge SPF uye DMARC.
Tags: DMARCemail kusimbiswaphishingspfspf zvinyorwa
Iwe Unokurudzira kana Kuodza moyo Vaverengi Vako?